IINGCAMANGO ZOMNTU WOMQOLOMBA KWIGUMBI ELINCINCI - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Iingcamango zomntu womqolomba kwigumbi elincinci
Nantsi igalari yethu yemiqolomba yomntu yegumbi elincinci kubandakanya ukuhonjiswa, ifanitshala, izixhobo, ukugqitywa, ukutyibilika, ukukhanya kunye nokuzonwabisa.
Liliphupha lendoda nganye ukuba nendawo yayo apho banokuhlala khona esofeni, bapholise ngaphandle okanye bonwabele isiselo. Uninzi lwethu ludinga indawo yokuphumla okanye ukonwabela izinto esizithandayo ezifana nokudlala isixhobo somculo esithandayo okanye ukuchitha ixesha elide kwimidlalo yevidiyo. Ngemfuno eguqukayo yesithuba sobuqu sentuthuzelo, imiqolomba yendoda yaba yinxalenye ebalulekileyo yekhaya.
iingoma zokuqala zomtshato zomdaniso 2020
Yintoni umqolomba wendoda? Umqolomba wendoda yindawo ekhethekileyo yendlu ebonelela ngokukodwa kwiimfuno okanye izinto zokuzonwabisa zamadoda. Esona sizathu siphambili sokuba kutheni imiqolomba yomntu ihlala ibizwa ngokuba ziindawo zokubalekela amadoda kuba inika konke kwindawo enye apho umntu angonwaba khona yedwa, ngelixa ethatha ikhefu kwimihla ngemihla okanye uxinzelelo kubomi bemihla ngemihla. Ke ngoku, ikwayigumbi le-hangout yamakhwenkwe okanye amadoda ayo yonke iminyaka.
Kuninzi okunokuphononongwa xa kusiziwa ekuhombiseni umqolomba ogqibeleleyo wendoda. Lithuba elifanelekileyo lokuphonononga zonke izinto ozithandayo kunye nezinto onomdla kuzo. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu kuthi onobunewunewu bendawo yokuyigcina kumqolomba wendoda. Ayisiwo onke amakhaya okanye amagumbi aneendawo eziphangaleleyo ezingaphantsi okanye amagumbi amakhulu okubamba ukwenza umqolomba omkhulu wendoda. Isithuba ngamanye amaxesha sinokuthintela, kodwa oko akuthethi ukuba amava akho kumqolomba omncinci womntu awunakuba mnandi. Zininzi iindlela zokuguqula indawo encinci kumqolomba wamaphupha akho. (Uyilo olukhulu jonga igalari yethu yezona zimvo zintle zomqolomba apha)
Ukuyila uMqolomba oMncinci
Iimpawu eziDumileyo zeCave Man encinci
Izimvo zomqolomba omncinci
Iingcebiso malunga nokuYila uMqolomba woMntu oMncinci
Apha ngezantsi sikunika imibono malunga nendlela yokuyila iindawo ezincinci zomqolomba kunye neempawu zabo eziqhelekileyo.
Nje ukuba ukhangele eyona ndawo ilunge kakhulu kumqolomba wendoda, lixesha lokuba uthathe isigqibo malunga nokuba izakubukeka njani.Ukuyila igumbi endlwini, ngokubanzi, ngamanye amaxesha kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo, kodwa kunye nesikhokelo esifanelekileyo kunye nokucwangcisa, inkqubo iba mnandi.
Ukuqonda ngcono ukuba yintoni umqolomba oyindoda kunye nokwandisa umqolomba wakho kumandla apheleleyo, nolu uluhlu lwezinto ezibalulekileyo ekuqwalaseleni uyilo kunye neempawu xa ucwangcisa umqolomba wendoda:
Uhlobo kunye noMsebenzi - Njengakuyo nayiphi na iprojekthi yoyilo, into yokuqala kunye neyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqaphele ngaphambi kokuyila umqolomba wendoda kukwazi injongo yendawo. Ukuchonga umsebenzi womqolomba wakho kuya kukunceda uthathe isigqibo kuyilo, uyilo, umxholo kunye nakwizinto kunye nokugqitywa kokuya kuthi ufuna ukugqiba iprojekthi.
Zibuze, ufuna ukuyisebenzisa njani umqolomba wakho? Ngaba uceba ukuyisebenzisa ekubukeleni iimovie? Okanye mhlawumbi ngokudlala imidlalo yevidiyo? Ngaba uza kuyisebenzisela ukuzonwabisa kuphela okanye ufuna ukuhambisa iziselo okanye ukutya okulula? Ngaba iya kuba ngumqolomba onamadoda amaninzi okanye ngaba ufuna ukunamathela kwinani elithile lemisebenzi? Cinga ngeminqweno yakho ephambili kunye nokuzonwabisa njengoko kuya kukukhokelela ekumiseleni injongo yomqolomba wakho.
Ngenxa yoko, injongo yomqolomba wendoda iya kuthi ichonge uhlobo lomqolomba womntu oya kuwufuna. Ngeli xesha, unokuba nombono oqhelekileyo kubungakanani bendawo, ukuze wazi izinto onokukhetha kuzo onokuzenza ngokubhekisele kwiindidi.
Njengoko sele kukhankanyiwe, uhlobo oluthile lomqolomba womntu luhlala lujolise kumdla wabasebenzisi. Isenokuba yibhar, igumbi lomdlalo, igumbi le-poker, iholo yasekhaya okanye studio somculo. Ngenxa yezizathu ezicacileyo, abantu abathanda imidlalo badla ngokuhamba nemiqolomba yamadoda ebandakanya izinto zokuzonwabisa ezinje ngeebhiliyoni, ichibi, ifososball okanye imijukujelwa. Abanye bade baye kwimidlalo yesintu engakumbi njenge-poker, chess okanye amakhadi.
Iimvumi, kwelinye icala, zihlala kunye nomqolomba wendoda onesitudiyo apho zinokudlala khona izixhobo okanye zirekhode iingoma. IiGeeks kunye nabadlala umdlalo bakhetha amagumbi omdlalo abonisa iingcebiso zomdlalo wevidiyo okanye oomatshini beArcade. I-Movie aficionados zikhetha imiqolomba yamadoda eneqonga lasekhaya kunye neenkqubo zesandi ezijikeleze indawo. Abaqhubi beemoto bahlala befuna uhlobo lwegaraji emiqolombeni apho banokugcina khona izixhobo kwaye baphonononge ivenkile yabo yemoto. Ngelixa iingqondi zikhetha izinto ezintle njengethala leencwadi okanye isifundo.
Ubeko -Ukuba uyiqondile injongo kunye nohlobo lomqolomba onqwenela ukuwufezekisa, ngoku lixesha lokuba uthathe isigqibo kubume bendawo. Ubeko lwendawo, ngokubanzi, okanye umqolomba wendoda kule meko, ixhomekeke ngqo kubungakanani nakwindawo epheleleyo yegumbi.
Uyilo lubhekisele kwindlela ezicwangciswe ngayo iziqwenga zefanitshala kwisithuba. Kubandakanya ukubekwa kwezihlalo zakho, ikhabhathi, iitafile, iinkqubo zokuzonwabisa, njlnjl. Le yeyona nto ibalulekileyo yoyilo ingakumbi ukuba ujongana nomqolomba omncinci wendoda. Uyilo lwefanitshala yomqolomba omncinci wendoda kufuneka ucwangciswe ngocoselelo ukuze wandise i-intshi nganye yommandla.
Ukujongana nolwakhiwo kunokubonakala ngathi kubuchwephesha, kodwa njengoko kukhankanyiwe kunyanzelekile ukuba ufumane ubuchule obuphezulu kumqolomba wakho. Kukwalungele ukudala isicwangciso somgangatho esilula sendawo okanye igumbi oya kuthi ulisebenzisele umqolomba wendoda yakho. Ngale ndlela unokuphonononga ubeko olunokubakho kwisithuba.
Kwiiprojekthi ezithile zomqolomba omncinci, uyilo olulula lobeko luya kwanela, ukuba nje imilinganiselo ngqo yendawo ibonakalisiwe kumzobo. Ukuba nedrafti yendawo yomqolomba womntu kuya kukunika isikhokelo malunga nokukhangela iziqwenga zefanitshala kuba uyakuyazi ngokulula into eza kulunga.Ungacwangcisa ubeko lwegumbi lakho ngokusebenzisa simahla Uyilo lwangaphakathi Isixhobo esifana nesiCwangcisi5, iSweethome3D okanye iMyVirtualHome.
Xa ucwangcisa ubeko lwendoda encinci umqolomba, unokujonga ukuqesha umyili wezinto zobungcali oza kukunceda. Abaqulunqi banokukunceda ukuba uthathe ingqalelo kuyo yonke intshi kunye nenxalenye yendawo yakho ekhoyo ukuze wenze umqolomba osebenza ngokupheleleyo kwaye ukholise umntu. Baza kuzisa inani lezinto ezinokubakho zefanitshala onokuzihlola kwaye zikuncede ngokukhangela ifanitshala efanelekileyo, iifenitshala kunye nezinto zesithuba. Ngaphandle kwalonto bakwabonelela ngezindululo ekusebenzeni kwifomathi yokuzoba eyenza ulwakhiwo lube lula kwikontraka, kuba banesicwangciso esineenkcukacha abangasilandela.
Uhlobo kunye nomxholo -Ngokwahlukileyo kwezinye iindawo zendlu, umqolomba oyindoda awunyanzelekanga ukuba uhambelane nesitayile sendlu yakho. Ungayila ngokuzimeleyo ngokusekwe kwinjongo eyenzelwe yona. Ngokungafaniyo neendawo eziqhelekileyo endlwini ezibonakaliswe ngokupheleleyo, imiqolomba yamadoda yindawo efihlakeleyo ebekwe kwigumbi elingaphantsi, iigaraji, kwigumbi eliphezulu okanye kwigumbi elisecaleni endlwini. Ngaphandle kokuba uyile umqolomba wendoda yakho ube yinxalenye yegumbi lokuhlala, ke leyo yenye yeemeko apho ubuncinci kufuneka ubugobe ngokuvisisanayo nazo zonke ezinye iindawo zendlu.
Isitayile somqolomba womntu siphathelene nokuyilwa koyilo, nokuba kungokwesiko, okwethutyana, okwangoku okanye okwangoku. Umxholo, kwelinye icala, unxulumene nomxholo okanye umxholo womqolomba wakho. Rhoqo kunoko, oku kugqithisela kuhlobo lomqolomba womntu ofuna ukuwahlola. Ke umzekelo, ukuba ungumthandi wezemidlalo, umxholo olungileyo kumqolomba wendoda uya kuba ngumdlalo wezemidlalo, kunye nesitayile sokuyila esifanelekileyo. Ngelixa uthanda ukuselwa, umxholo onokuthi ube yindawo yokutshisa ibhiya enesitayile selizwe.
Nje ukuba ufumane indawo efanelekileyo yomqolomba womntu wakho, sele ugqibe ngohlobo, umxholo kunye nesitayile, kwaye ulungiselele olona lwakhiwo lubalaseleyo, ngoku lixesha lokuba unike umntu umqolomba wakho.
Ezi zinto zidweliswe apha ngezantsi zenza uyilo olupheleleyo lomqolomba wendoda yakho, ukusuka kwinto yokwakha, ukugqiba, ifenitshala ukuya kwezona nkcukacha zincinci kwisithuba esifana nokuhonjiswa kunye nezixhobo. Nazi izinto ezibalulekileyo ekufuneka uthathe isigqibo ngazo xa uyila umqolomba wendoda encinci:
Ifanitshala -Ifanitshala iquka indawo enkulu yoyilo lomqolomba wendoda. Ukwenza ukuba umqolomba wakho ugqibezele, kufuneka ukhethe ifenitshala eyomeleleyo eya kukunika intuthuzelo ephezulu, ukusebenza ngokukuko, ukuhlala ixesha elide kunye nomgangatho wobugcisa obuhle.
Ezona ndidi zixhaphakileyo zefanitshala ezinokufunyanwa emiqolombeni yendoda zihleli njengeesofa, izitulo zengalo kunye nezitulo ezingqengqileyo. Ukuhlala kuhlala kuncedwa ngeetafile ezisecaleni, ngelixa ugcino lubandakanya iikhabhathi zetv, amaziko eendaba, iishelfu, iikhabhathi zebar kunye neeshelfu zeencwadi. Ifenitshala ekhethekileyo enje ngezitulo zemidlalo, izitulo zokuthambisa, iitafile zokudlala ziyathandwa kuyilo oluphezulu ngakumbi.
Xa ukhetha ifanitshala yemiqolomba yamadoda amancinci, khetha iziqwenga ezineenjongo ezininzi njengoko zikunceda wandise indawo. Ukulinganisa kukwabalulekile njengoko unokufuna ukukhangela uyilo olucekeceke ngakumbi xa kuthelekiswa nemiqolomba emikhulu. Xa kuziwa kwimathiriyeli, khetha izitulo kunye neesofa ezenziwe ngofele njengoko kulula ukuzigcina kwaye zihlala ixesha elide.
Ukongeza kwizibonelelo zayo ezibonakalayo, iisofa zesikhumba zikwabonelela ngomlinganiswa omninzi kwaye zikhuthaza ukubonakala okuphezulu. Nangona ibonakalisiwe yomelele, ifanitshala eyonyuselweyo yesikhumba inomdla wokubanda ngexesha lasebusika kwaye inokubila xhopho ngamaxesha ashushu ehlobo. Enye indlela yelaphu okanye yelaphu indawo yokuhlala kwaye bazisa intuthuzelo kunye nokutya okuninzi. Ukongeza, iisofa ezonyuswe amalaphu nazo ziyomelela kwaye zinokumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Nangona kunjalo, ukuba uza kutshaya ngaphakathi emqolombeni womntu, khetha amalaphu angawagciniyo amavumba anje ngoboya.
Xa kuziwa kumbala kunye nepateni, khetha imibala ephakathi ukuya emnyama. Umdaka nothuli azifumaneki ngokulula kwiisofa ezinemibala emnyama xa kuthelekiswa nemibala emhlophe nokukhanya. Ukongeza, ifenitshala emnyama enombala zizinto ezifanelekileyo zokugqibezela kwiindonga ezinemibala ekhanyayo, umbala ongowakhethwa kupeyinti emiqolombeni emincinci yamadoda. Ifenitshala emnyama kunye neendonga ezinemibala ekhanyayo zizisa umahluko kwaye zongeza ubunzulu kuyilo lwesithuba.
Kwakhona qaphela ifanitshala yolondolozo esezantsi okanye ezo zinokucocwa ngokulula kusetyenziswa isicoci okanye isicoci esilula nelaphu. Khumbula, ixesha elininzi lichithwa emqolombeni wendoda, kwaye ngenxa yoko banobungozi ekungcoleni kusetyenziso lwemihla ngemihla.
Qaphela ukuba ifanitshala yendoda yakho encinci akusoloko kufuneka ibe ntsha. Ukuba usebenza nohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo, cinga ngokuhlaziya iziqwenga zefanitshala ezindala kwaye ubanike inkangeleko entsha. Guqula iisofa ezindala kunye nezingqengqelo ngokuphindisela kwakhona kwaye unike iikhabhathi kunye neetafile ingubo entsha yepeyinti okanye ibala lomthi. Enye indlela esebenzayo kukuphonononga iimarike zentakumba ngeentengiselwano ezilungileyo. Musa ukoyika ukuthenga isitulo se-wingback se-vintage okanye i-recliner engakhathalelwanga, nanjengokuba ingalunganga kangakanani ilaphu labo, ungasoloko ufumana ilaphu eliza kusebenza ekuphuculeni inkangeleko yalo kwaye liyenze ilungele umxholo womqolomba wendoda yakho. Ungayishiya ingcinga yakho isebenze xa kuziwa ekubuyiseni kwakhona iziqwenga zefanitshala ezindala kumqolomba wakho wendoda.
Ukuhombisa -Ukuba sowuzinzile kwiziseko ezisisiseko zomqolomba wendoda yakho, ngoku lixesha lokongeza kwi-decor. Ukuhonjiswa kunye nezixhobo ezisemqolombeni wendoda kuthathwa njengokubaluleke ngokulinganayo njengefanitshala yayo kuba iyanceda ukugqibezela ukujonga konke, ngelixa ibonelela ngento ebonakalayo kwindawo.
Ukuhonjiswa kubandakanya izincedisi kunye nezinye izinto ezizodwa ezivela kwinto elula yobugcisa okanye eqingqiweyo, ingqokelela eqingqiweyo yamakhadi ebaseball okanye ijezi yezemidlalo, imiqondiso ekhanyayo, izibane zelava, iziginkci zokuvuna, ukuqokelela kunye nezinye izinto ezikhunjulwayo. Uninzi lwezi zinto lunokuvela kuqokelelo lwakho, njengezixhobo zomculo, amanani ezenzo, ukuqokelelwa kwamakhadi okanye iiposta. Unokufumana into yokuhonjiswa komqolomba kwiivenkile ezininzi zakudala, iivenkile zokudlala okanye igaraji kunye nokuthengiswa kweyadi. Ababoneleli abakwi-Intanethi kunye neendawo zeefandesi zikwabonelela ngokufumana okwahlukileyo okunokwenza ukuba uyilo lwakho lomqolomba lube nomdla ngakumbi.
Ekugqibeleni, uhlobo lokuhonjiswa oluza kuludinga umqolomba wendoda yakho luya kuxhomekeka kumxholo okanye ukhethe ukuhamba nawo, nokuba unxulumene nezemidlalo, umculo, iimuvi, iimoto okanye umdlalo. Umzekelo, kumculo womqolomba onomxholo womculo, unokwenza umboniso weeposters zakho ezikhethekileyo zebhendi, ubonise idwala kunye nokuqengqeleka kwememorabilia, izixhobo zomculo ozithandayo, okanye uqaqambise inkqubo yakho yesandi egungqisa umhlaba.
Xa kuziwa ekukhetheni ukuhonjiswa okufanelekileyo emqolombeni wendoda yakho, kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba ukuhonjiswa kwakho kuya kunceda ukuseta ithowuni yokonwabisa ekhaya kwaye kwangaxeshanye iya kuchaphazela imeko yokuma kunye nemo yendawo yakho. Kwiindawo ezincinci zomqolomba wendoda, khumbula ukuba ungaze uhambe ngaphezulu kokuhombisa njengoko inomdla wokwenza igumbi lakho liziva lixinekile. Kananjalo jonga umlinganiso, njengoko ubungenakufuna ukuba umfanekiso oqingqiweyo ophilisayo weqhawe lakho olithandayo uthathe isiqwenga somgangatho wakho wexabiso.
unxibe ntoni emtshatweni abafazi
Kwakhona, indoda yakho imihombiso yokuhombisa ayisoloko kufuneka intsha. Cinga ukuphindaphinda izinto ezindala ukuze zisetyenziswe ngokutsha. Akunyanzelekanga ukuba ube yingcali ka-DIY ukunika igumbi ipunch eyongezelelweyo. Ezinye zezona zinto zipholileyo zokuhomba komqolomba womntu zingafunyanwa kwiindawo zentengiso yeediliya, iimarike zentakumba okanye kugcino lomnye umntu. Qiniseka nje ukuba ukunqanda izixhobo eziza kuthi ziphambuke kumxholo wakho. Ukongeza, hlala kude nakweyiphi na into ethambileyo okanye ebubhinqileyo, ezinje ngeentyatyambo eziprintiweyo zokuphosa imilo, amakhandlela anevumba elimnandi okanye ii-doilies.
Ukuzonwabisa Njengoko kukhankanyiwe, umqolomba oyindoda ngokubanzi yindawo yokuzihlaziya nokuzonwabisa. Nokuba umkhulu kangakanani umqolomba wendoda yakho, awuyi kuba ngamava amnandi ukuba akukho nto unokuyenza ngaphakathi.
Ngokwesiqhelo, imiqolomba yamadoda ibonisa ukonwatyiswa kunye nefenitshala ekhethekileyo ekhuthaza imisebenzi eyahlukeneyo enokuthi incede ekupheliseni. Iza ngeendlela ezahlukileyo kwaye iya kuxhomekeka kakhulu kwizinto ezininzi ezinje (1) umxholo wesithuba esihlala sisekwe kwinto oyithandayo, (2) uhlobo lomqolomba wendoda yakho, kwaye okokugqibela (3) ubukhulu bendawo yayo . Ezinye zeendlela zokuzonwabisa zefanitshala ngamaziko osasazo, iitafile zephuli, izitulo zokuthambisa, imidlalo ye-arcade, iitafile zepoker, itafile yentenetya, ihokhi yomoya okanye itafile ye-foosball.
Zonke iiphakheji zekhefu lomtshato eMexico
Isithuba sithathwa njengeyona nto iphambili yokuthatha isigqibo kuhlobo lwefanitshala yokonwaba kuba amaxesha ngamaxesha, iyanciphisa. Ngenxa yezizathu ezicacileyo, umqolomba omncinci womntu unokungakwazi ukulungiselela iifenitshala ezinobunkunkqele ngaxeshanye -ibhola ekhatywayo kunye netafile yephuli egcweleyo ayinakubekwa kwigumbi le-200 sq ft, ngendlela efanayo abahlanu abahleli ngayo izitulo zemidlalo yeqonga ziya kulunga kuyo. Nangona ubukhulu bendawo buyinto ethintelayo ngokobuninzi befanitshala, oko akuthethi ukuba umqolomba omncinci womntu awunakuba mnandi kwaphela
Xa ujongene nezithuba zomqolomba omncinci, khetha iziqwenga zefanitshala ezinokulingana. Ukongeza, bambelela kwinto enye oyithandayo kunye nenqaku kwindawo yakho. Eyona nto ibaluleke kakhulu, cwangcisa uyilo, kuba nokuba incinci kangakanani indawo yakho, ukuba icwangciswe ngobuchule, ungayandisa kwaye ubonise lonke ulonwabo olifunayo.
Ukulayita -Uninzi lwethu luhlala ludibanisa imiqolomba yendoda kunye nento emnyama okanye emnyama. Nangona kunjalo, akusoloko kunjalo. Njengakulo naliphi na igumbi lendlu, ukukhanya kubaluleke kakhulu ngokwemiqathango yokuphucula imeko yomoya kunye nomqolomba womntu.
Qiniseka ukuba umqolomba wendoda yakho ufumana ukukhanya okuninzi, ngakumbi ukuba ujongana nendawo encinci. Ukugcina kukhanya kuyakwenza ukuba igumbi libonakale likhulu,I-airier kwaye ilula, ngelixa kwangaxeshanye ikunceda wenze imisebenzi ngokulula. Thatha indawo yokukhanya kwemithombo yendalo enje ngeewindows kodwa ubandakanye nezibane zokufakelwa ezifana nokukhanya okuqhelekileyo, ukukhanya kwemisebenzi kunye nokukhanya okumileyo njengenxalenye yoyilo
Unokukhetha kuluhlu olubanzi lokhetho olunje ngezibane ezixhonyiweyo zesilingi, izibane zomgangatho, izibane zodonga, isikwere, izibane zomtya, izibane ezifihliweyo kunye ne-LED. Ngaphandle kwezibane zasemini eziqhelekileyo kunye nezibane ezinemibala efudumeleyo emhlophe, unokujonga ukukhanya kwezibane ezinje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye omfusa ukuseta ithoni kumqolomba wendoda yakho.
Ezinye izimvo zokukhanyisa emiqolombeni yamadoda amancinci zibeka izibane zerobhothi kwindawo egxothiweyo okanye ehle isilingi, ukuseta isibane somgangatho kwikona okanye ukukhanya kwezibane ezikhanyayo ukuqaqambisa iiposta kunye nememorabilia ezixhonyiweyo
Umgangatho - Umgangatho ukwenye into ephambili yoyilo ekufuneka icwangciswe ngononophelo kwimiqolomba yamadoda amancinci, kuba ngaphandle kokufaka isandla kwi-aesthetics ebonakalayo, ikwachaphazela indlela indawo esetyenziswa ngayo ngokweendlela. Kukho uluhlu olubanzi lwezinto ezisemgangathweni ezisetyenziswa rhoqo emiqolombeni yomntu kwaye ezi ndlela zibandakanya ukutyibilika kokhuni oluqinileyo, i-laminates, i-vinyl, iithayile zeceramic, ilitye lendalo, ikhonkrithi, ikhaphethi kunye nekhokho. Nganye kwezi zinto ibonisa ezazo izinto ezintle nezingalunganga kwaye zibonelela ngomlinganiswa owahlukileyo emqolombeni wendoda.
Umthi sisiphelo esithandwayo somgangatho wemiqolomba yomntu ngenxa yokuqina kwayo, ubushushu bemvelo kunye nokuqina kwendalo. Isebenza ngokugqibeleleyo nangowuphi na umxholo okanye isimbo yoyilo, ngelixa kwangaxeshanye inobuhle beklasikhi ekunzima ukuwuqaphela. Nangona kunjalo, ukuba ucwangcisa ukusebenzisa umqolomba wendoda yakho njengegumbi lohlobo lwegaraji, ke oku akunakuba lolona khetho lwakho lubalaseleyo njengoko lunokukrwempa.
Ikhaphethi yenye indoda ethandwayo yomqolomba ukugqiba ukugqiba. Ngaphandle kokufikeleleka, iikhaphethi zibonelela ngokuthamba okuthambileyo kwiinyawo ezenza ukuba zikulungele ukuhamba okanye nokuhlala ixesha elide. Iikhaphethi zisebenza ngokukuko kwimiqolomba yamadoda enomxholo weqonga lasekhaya njengoko zinceda ekuphuculeni i-acoustics, isandi kunye nolawulo lwengxolo kwigumbi. Xa kuthelekiswa nezinto ezikhazimlayo nezilukhuni ezifana neetiles zeceramic, iikhaphethi zifunxa izandi kwaye zinokunceda ukuphucula umgangatho we-acoustical.
Iithayile ze-ceramic aso zisebenza kakuhle kunye nomgangatho wemiqolomba yamadoda ngenxa yomelele, ukufikeleleka kunye nokusebenza ngokuchaseneyo. Ziza ngemibala eyahlukeneyo, iipateni kunye noyilo olusebenza kakuhle nangalo naluphi na uhlobo lomxholo. Qiniseka nje ukuba xa ucinga ngeethayile njengomgangatho wemiqolomba yendoda yakho, jonga ubume bayo okanye ukugqiba kwayo. Iithayile zecaramic ezicoliweyo zinendawo emenyezelayo enokuba ityibilika. Njengoko sele kukhankanyiwe, zikwabonisa izandi kwaye azicebisi kangako ukuba zisetyenziswe kumagumbi omculo okanye emiqolombeni yasekhaya yemidlalo
Ikhorki, ivinyl kunye neelaminates zikwezinye iindlela zokukhetha ukutyibilika, nangona kunjalo azomelele njengezinto ezintathu ezikhankanywe apha ngasentla. Zonke ziyafikeleleka, ziza zinemibala eyahlukeneyo kunye noyilo kodwa zinamanqanaba ahlukeneyo okuzinza kunye nokomelela. Imigangatho yethayile yekhokhoza iluncedo xa udlala imijikelezo emininzi yephuli njengoko bekhululekile ukunyathela, abubeki ngozi yesiliphu kwaye bomelele.
Xa ukhetha imathiriyeli yaphantsi kwemiqolomba yamadoda amancinci, kubalulekile ukuba uqwalasele umbala njengoko uyakuchaphazela indlela esijongwa ngayo isithuba- nokuba siba sincinci okanye sikhulu. Imigangatho enemibala emnyama ityekele ekwenzeni iindawo ezincinci zibonakale ngathi zinezithintelo ngakumbi, ngelixa imigangatho enemibala ekhanyayo inokudala ukukhohlisa kwendawo enkulu. Nangona kunjalo, imigangatho emnyama inemibala isenokusetyenziselwa imiqolomba yamadoda amancinci ukuba nje ubandakanya umlinganiso wokulinganisa, njengodonga olunombala we-beige okanye ifanitshala enemibala ekhanyayo.
Okona kubaluleke kakhulu, soloko uhamba kunye neenyawo ezifanelekileyo kumgangatho. Njengoko intuthuzelo kufuneka ibe yinjongo ephambili ekuyileni imiqolomba yamadoda, qiniseka ukuba imigangatho yakho ikulungele ukuhamba okanye ukuhlala kuyo. Kuya kufuneka kunciphise ukubakho kweengozi zokutyibilika kwaye ikwazi ukumelana nokuwohloka kunye nokuqhekeka kokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Izinto kunye nokugqiba - Izinto kunye nokugqitywa kuya kukunceda ufezekise ukujonga okufunayo kunye nokuthungwa kunye neetoni zomqolomba wakho. Oku kubandakanya ukugqitywa kweendonga, umgangatho, isilingi kunye nokwakhiwa kweempawu kwisithuba. Ukugqitywa okukhethekileyo, kwelinye icala, kubandakanya iiphaneli zomculo, i-glazing, i-accents, njl.
Xa ukhetha izinto zomqolomba omncinci, qiniseka ukuba uqwalasele ubuhle kunye neengozi zabo njengoko zingayi kuphucula ukubonakala kwendawo kodwa umgangatho wayo kunye nobomi bayo ngokunjalo. Khetha ukugqiba okufuna ukugcinwa okuphantsi ukuze ungakhathazeki malunga nokucoca rhoqo.
Indlela yesitayile sakho somqolomba kunye nomxholo okhutshwe kwisithuba uya kuxhomekeka kwindlela odibanisa ngayo ezi zinto. Umzekelo, abantu abathanda izinto ezintle banokuya kugqityiwe okunika ugxininiso oluphezulu kwizixhobo ezisemgangathweni kunye nobunkunkqele. Unokukhetha iindawo eziphambili ezinje ngeshelufu yencwadi, isitulo esidala sesikhumba kunye nezinye iindawo ezipholileyo.
IiNkqubo zoMbala -Amanye amadoda asenokungabaluleki ngakumbi malunga nezikimu zemibala, okanye nokuhonjiswa kwendawo, nangona kunjalo ezi zinto zenza umahluko ngokwe-aesthetics ebonakalayo. Rhoqo, imibala yobudoda efana nokungathathi hlangothi njengombala omdaka, ngwevu, mnyama okanye ii-aksenti ezinje ngemibala eluhlaza okanye emnyama. Le mibala ibonelela ngokuguquguquka kwaye isebenzela uninzi lweendlela zomqolomba womntu. Ukongeza, ziyimvelaphi efanelekileyo yokugqitywa okuqhelekileyo njengokhuni, isikhumba okanye ilitye. Ungakulungela ngakumbi malunga neengcebiso zethu ngemibala yamapango amancinci endoda njengoko sihamba neli nqaku.
Ngokwesiqhelo, imiqolomba yamadoda ihlala ibekwe kwigumbi elingaphantsi, kwigumbi eliphezulu, kwigaraji okanye kwigumbi elisecaleni endlwini, nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu ofumana obu bumnandi bendawo. Imiqolomba yomntu ayisoloko imele ukuba nkulu, inokuba ncinane okanye nokuba yinxalenye yendawo esele ikhona endlwini. Logama indawo inikezelwe le njongo ikhethekileyo kwaye isebenza njengendawo yokubuyela umva apho ungathatha khona ikhefu kwimisebenzi yemihla ngemihla, emva koko sele unomqolomba wendoda.
Ezi ziimeko ezinokubangela ukuba umqolomba omncinci wendoda aqwalasele: inokuba ngumqolomba wendoda, umqolomba ophindaphindwayo okanye umqolomba wendoda oxutywe nesinye isithuba. Umqolomba woMntu omnye - Umqolomba womntu wenzelwe ngokukodwa umsebenzisi omnye. Oku kufanelekile kwiindawo zokuhlala apho indawo ikwipremiyamu njengeikhondomu, iiflethi kunye neeflethi. Umqolomba womntu ngokwesintu ubizwa ngokuba sisifundo okanye iofisi, apho amadoda ahlala esenza umsebenzi wakhe okanye efunda iincwadi, kodwa njengoko ixesha lihamba, liye laguquka laba yindawo yokuzikhulula, yoxinzelelo kunye nokuzonwabisa.
Umqolomba womntu ubeka ifanitshala enokuhlala umntu omnye, enje ngesitulo senkwenkwe esonqenayo, isitulo sokuthambisa okanye idesika, ukugcina ifenitshala imbalwa kwaye isebenza ngokufanelekileyo. Ukulungiselela iinjongo zokuzonwabisa, umqolomba womntu unokubandakanya ibhodi yezemidlalo, umdlalo omnye we-arcade okanye iTV enesihlalo sokudlala.
Indawo ebuyiselwe injongo yoMqolomba woMntu - Olunye ukhetho lokujonga xa ujongene neendawo ezinqongopheleyo ekhaya kukusebenzisa igumbi elidala emqolombeni wendoda. Xa izithuba ezindala zichithwa, zinokusetyenziselwa injongo entsha, nokuba ingaphantsi kangakanani indawo yabo. Inokuba ligumbi langaphambili leendwendwe okanye iindawo ezingakhathalelwanga ekhaya ezinjengee-attics okanye iigaraji. Icebo lokuphindaphinda kukufunda imeko esele zikhona zesithuba, emva koko uthathe ingqalelo kwiimpawu zayo ukuze uzenze zanakho ngokupheleleyo.
Umqolomba womntu oxutywe nendawo eyahlukileyo-Umqolomba wendoda awusoloko kufuneka uvalelwe, ngamanye amaxesha unokuxutywa nendawo esele ikhona yendlu njengegumbi lokulala elingenanto, ulwandiso lwegumbi lokuhlala, ipatio okanye igaraji. Olunye ukhetho kukudibanisa iofisi yabucala kunye nelayibrari. Olona thuba luphambili emiqolombeni yomntu eneendawo ezidityanisiweyo kukuba ikuvumela ukuba ubonelele iimfuno ezimbini ngaxeshanye, okanye ukuba ukhetha ngakumbi kunokusetyenziswa njengendawo yomqolomba womntu njengoko kufuneka, kodwa eyona njongo yesithuba isadibana.
Cinga ngentuthuzelo -Umqolomba wendoda wenzelwe ukukunceda uziphumze emva kosuku olude oludinayo okanye ukonwabele nje ukuzihlaziya nokuzonwabisa. Ngale ngqondo, usukelo lwakho oluphambili ekuyileni umqolomba wendoda kufuneka uhlale uthuthukile, nokuba ungakanani ubukhulu bendawo.
Khangela izinto zokwakha, ezigqityiweyo kunye nefenitshala eya kuzisa intuthuzelo kwaye ikuvumele ukonwaba ngamava, ngakumbi kuba uya kuchitha ixesha elininzi emqolombeni womntu. Vavanya iisofa okanye i-recliners ngaphambi kokuba uzithenge kwaye uqiniseke ukuba zipholile ngokwaneleyo ukuba zingahlala kwiiyure nokuba zibukele imovie okanye ukudlala imidlalo yevidiyo. Khetha i-flooring enobuhlobo ezinjengekhaphethi, ikhokho okanye ukhuni.
Izitulo ezibini ezihleli phantsi kunye nekhonsoli yeziko- Jonga kwi IAmazon
Gcina kukhanya kwaye kukhanya - Njengomgaqo oqhelekileyo kuyilo, imibala emhlophe kunye nokukhanya kunokwenza ukuba amagumbi amancinci abonakale emakhulu kuba abuyisa ukukhanya ngcono kunemibala emnyama. Iphalethi yombala okhanyayo inokongeza ubomi kwindawo ngaphandle kokuba nzima kakhulu emehlweni, ngelixa icebo lemibala elilawulwa ziithoni ezimhlophe ezimhlophe zingenza umqolomba wendoda uzive unomoya kwaye uqaqambile.
Imiqolomba yomntu nayo ayisoloko imnyama kwaye ilusizi. Xa ujongene nemiqolomba yamadoda amancinci, peyinta iindonga ngombala okhanyayo we-beige, omdaka, luhlaza okanye luhlaza okwesibhakabhaka. Ukudweba umntu umqolomba ngemibala emnyama kungenza indawo izive icinene kwaye inokwenza kubonakale ngathi iyacaba. Gcina imibala emnyama ye-accents kwindawo enje nge-trim, i-cornice, iibhodi ezisezantsi kunye nezinye izixhobo kunye nezinto zokuhombisa. Unokongeza umbala wepal kwiphalethi yakho ekhanyayo ukuyenza ibenomdla ngakumbi.
Okungaphantsi kuninzi - Esinye isitshixo sokwandisa indawo yokuthengisa yomqolomba kukugcina uyilo lincinci. Nokuba yeyiphi na indlela ekhoyo yomqolomba wendoda yakho, qiniseka ukuba uyayithintela ukuba ingajongeka njengendawo yokugcina enefenitshala eninzi okanye yokuhombisa. Lumka xa ukhetha iimpahla zakho. Ukuba neziqwenga zefanitshala ezinencasa nezisebenzayo yenye yeendlela zokutsala umdla kwisithuba, ngelixa kwangaxeshanye ulungiselela iimfuno zabasebenzisi.
Khetha isitetimenti esinye sefenitshala ukumilisela indawo yakho - Anchor uyilo lwendawo yakho ngokukhetha isitetimenti esinye sefenitshala eya kusebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kuyilo. Inokuba sisiqwenga esikhulu sesofa okanye i-recliner eya kuthi ibophelele ukuhonjiswa kwegumbi lakho kunye. Kunye nesiqwenga sefenitshala yakho enkulu, yiza neefenitshala ezincinci ezimbini okanye ezintathu zokuncedisa uyilo lwakho, njengesihlalo, i-ottoman, itafile esecaleni, itafile yokuphela, itafile yekofu okanye ishelufu yeencwadi.
Sihlalo we-Faux yesikhumba somgqomo-Jonga kwi IAmazon
Khetha ifanitshala yeenjongo ezininzi - Ngenxa yokuncitshiswa kwendawo, umqolomba omncinci uya kuba nakho ukulungiselela isixa esincinci seziqwenga zefanitshala. Ukuqinisekisa ukuba wenza okungcono kuyo, khetha ifanitshala yeenjongo ezininzi njengenxalenye yoyilo lwakho. Faka imibhede yeesofa ezinokutshintsha ukusuka ekuhlaleni kwisitulo esityebileyo, ukubonelela ngentuthuzelo ephezulu malunga nokuphumla okanye nokuphumla. Faka itafile yekofu enamagumbi okugcina apho unokubeka khona izinto ezincinci ezinje ngabalawuli bekhonsoli yomdlalo, izinto ezikude, umdlalo webhodi, njl.njl. Itafile ezandisiweyo zinokusetyenziswa njengendawo yokutya okulula kunye neziselo, ngelixa amaziko eendaba anokusetyenziselwa ukugcina. . Ekugqibeleni, sika izinto ezingafunekiyo kuyilo lwakho kwaye unamathele kwizinto zefanitshala eziluncedo.
Itafile yomdlalo ojikelezayo kwimidlalo yamakhadi- Jonga kwi IAmazon
Fumana ubungakanani obufanelekileyo befenitshala - Ukukhetha ubungakanani obufanelekileyo befanitshala ngokulingana nendawo yegumbi kubalulekile ngokubhekisele kubuhle obulungeleleneyo. Kunye nesikali esifanelekileyo, ukubekwa kweengceba zefenitshala kubalulekile ekunikeni umbono wokuphanga. Xa uyila isithuba somqolomba omncinci, qiniseka ukuba ufumana ubungakanani obufanelekileyo befenitshala kwaye uphephe ukuhlanganisa indawo ngefanitshala enkulu njengoko inokwenza ukuba igumbi lakho liziva lincinci ngoko nangoko. Kukulungele ukuqaphela imilinganiselo ngokubanzi yomqolomba wakho wendoda okanye ugcine umzobo olula okanye ubeko lwendawo ukuze ube nesikhokelo njengoko uthenga ifenitshala. Ngenye indlela, unokuqesha uMyili wangaphakathi oqeqeshiweyo njengoko banokukukhokela ekukhetheni ifenitshala elungileyo kunye nokwenza ngcono indawo yakho yomqolomba ngendlela ebukekayo.
Cinga ukuxhoma iTV yakho - Indlela elungileyo yokonga indawo kumqolomba omncinci kukulahla ikhabhathi yakho kamabonwakude, yima okanye ududuze, emva koko ubeke endaweni yayo udonga olubekwe kwiTV. Faka iishelufu ezixhonyiweyo phantsi kodonga olufakwe kumabonakude apho unokubeka khona ibhokisi yakho yekhebula okanye ikhonsoli yomdlalo wevidiyo. Ukongeza, seta indawo yokugcina eyongeziweyo yezixhobo zombane, iiseti zentloko kunye nabalawuli ukubathintela ekuxakaniseni isithuba kwaye kwangaxeshanye uzigcine zingafikeleleki lula xa kufuneka njalo.
Udonga olukhulu lwethayile yeTV ekhanyayo-Jonga kwi IAmazon
Khulula indawo yomgangatho - Ngokunxulumene nencam yoyilo olungentla, khetha ukuxhoma iishelufa, iiyunithi zokugcina ezingaphezulu kunye nefenitshala ebekwe eludongeni njengoko zikunceda ukhulule indawo yomgangatho. Endaweni yokuhlala kwendlu yomqolomba njengeememorabilia, izinto eziqokelelweyo, amanani ezinto ezenziwayo okanye ingqokelela yomdlalo wevidiyo kwiikhabhathi ezizimeleyo, zibonise ngokuxhoma iishelfu kunye neephedi.
Sukuhamba ngaphezulu kokuhombisa - Ukuhonjiswa okuninzi kunokwenza ukuba umqolomba wakho uziva ngathi uxinekile. Endaweni yokugcwalisa imiboniso yakho ngezinto ezininzi kakhulu njengezincedisi kunye neememorabilia, thintela ukugcwala kwamashalofu kwaye ukhethe kuphela izinto ozithandayo okanye ezona ziqwenga zibalaseleyo ufuna ukuzibonisa. Khetha uhombiso oluyingqayizivele njengemisebenzi yobugcisa, imizobo, izinto zeediliya kunye nemifanekiso eqingqiweyo yakudala njengoko bongeza iklasi kumqolomba wendoda yakho kwaye kwangaxeshanye, sebenza njengeziqalo zencoko.
Uphawu lomqolomba womntu weNeon-Jonga kwi IAmazon
Phucula ukukhanya - Bekusoloko kukho ukungaqondi ukuba umqolomba wendoda kufuneka usoloko ungacacanga, kodwa eneneni, ukukhanyisa yinxalenye ebalulekileyo yokudala imeko elungileyo kunye nokuma komqolomba wendoda. Qiniseka ukongeza izibane ezinjengeesilingi ezifakwe kumqolomba wakho ukuze uhlale ukhanya. Ngaphandle koko, yongeza ukukhanya kwezibane ezifana nezibane eziluhlaza okwesibhakabhaka, izibane zomgangatho kunye nokufiphala ukuba ufuna ukwenza imeko entle yomqolomba wendoda yakho.
Umama oluhlaza wengubo yomyeni
Sebenzisa izipili ukwenza inkohliso yendawo - Nokuba ujonge kweliphi igumbi endlini yakho, Izibuko zisebenza ngokumangalisayo ngokwenza amagumbi amancinci abonakale emakhulu. Ukudala inkohliso yendawo enkulu, faka izibuko kuyo yonke uyilo lomqolomba womntu. Unokuxhoma isipili sebar yokuhombisa okanye usebenzise umgangatho ukuya esipilini njengezonyango zodonga. Ifenitshala ebunjiweyo enjengeetafile zekofu nazo zinegalelo kule nto njengoko zibonisa ukukhanya ngakumbi, zisenza isithuba siziva sikhulu. Ukubeka isipili malunga nomthombo wokukhanya kwenza ukuba amagumbi abonakale eqaqambile okoko ukukhanya kubuyela umva.
Dlala ngemigca - Olunye iqhinga loyilo oluthembekileyo lokwenza amagumbi amancinci abonakale emikhulu kukusetyenziswa kweepateni ezinemigca kwiindawo. Xa uyila imiqolomba yamadoda amancinci, ungoyiki ukudlala ngeepateni. Beka ugxininiso kwimigca ethe nkqo njengoko isenza umfanekiso ongekhoyo kudonga olude, ngelixa ubalaselisa imigca ethe tyaba ukuba ufuna ukwenza udonga lubonakale lubanzi.
Ungazifaka ezi patheni ngokusetyenziswa kwamaphephadonga njengokugqitywa kodonga olusisigxina. Olunye ukhetho kukusebenzisa ii-laminates zomthi kunye neepateni zokugaya ezithe tyaba zefanitshala eyakhiwe kancinane okanye i-laminates yomthi eneepateni zokumisa nkqo ezinde ezakhiwe ngefanitshala.
Cinga ngekhabhinethi yebar okanye inqwelo yebar - Kungenxa yokuba isithuba somqolomba wakho wendoda silinganiselwe, oko akuthethi ukuba awunakufaka ibha kuyo. Kubathandi bokusela, zininzi iindlela zokuzonwabisa kunye nokunikezela iziselo ekhaya ngaphandle kokwenza ibar epheleleyo. Cinga ngokubandakanya ikhabethe yebar apho ungagcina khona utywala kunye nezinye izixhobo zebartending ukulungiselela iziselo.
Ikhabhathi yebar eqengqelekayo
Ikhabhathi yebar enokususwa kunye nokugcinwa kwewayini- Jonga kwi IAmazon
Ungayifaka le nto kwikona yomqolomba wendoda okanye uyakhele ngaphakathi eludongeni. Ngenye indlela, ungasebenzisa inqwelomoya ngenjongo efanayo njengoko ibonelela ngokushukumiseka njengokufikeleleka okuphezulu. Inqwelwana yebharki ingabekwa kude naphakathi kweefenitshala zefanitshala okanye kwii-nooks ezingakhathalelwanga, ngelixa kwangaxeshanye ungayikhupha nanini na uyifuna.
Yongeza ezo zinto uzichukumisayo - Zenzele! Umqolomba womntu wakho ubonakalisa ngokuthe ngqo izinto ozithandayo kunye nezinto onomdla kuzo. Kwaye isithuba esincinci akufuneki sikuthintele ekudaleni umqolomba oyindoda ongqinayo kuwe.
Qinisekisa ukongeza kwisiqwenga sobuntu bakho kwizihombiso zakho. Uthando lwakho lwemoto okanye umdyarho lunokuba lukhuthazo olufanelekileyo njengomxholo womqolomba wakho omncinci. Chaza uthando lwakho lomculo ngokuguqula umqolomba wakho omncinci ube sisisitudiyo esincinci. Ngelixa ubukrelekrele, yenza umqolomba omncinci onethala leencwadi uziva uzele ziishelufa zeencwadi, isitulo esenziwe ngesikhumba kunye nobugcisa obungabonakaliyo.
(1) Indawo yaseTuscan ukusuka kwiVimeo
Indawo efanelekileyo yeethoyi zesini
iilokhwe ezisemthethweni elunxwemeni zeendwendwe
Isikripthi somsitho womtshato olula ongengowenkolo